ခေတ်သစ်ယောရှုများ လိုအပ်နေပြီ။ | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 22/06/2012
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဓမၼသီခ်င္း.	Leaveacomment
ထာဝရဘုရား၏ ကျွန်မောရှေသည် အနိစ္စ ရောက်သောနောက်၊ မောရှေလက်ထောက်၊ နုန်၏သား ယောရှုအား ထာဝရဘုရားက၊ ငါ၏ကျွန်မောရှေသည် အနိစ္စရောက်လေပြီ။ သို့ဖြစ်၍၊ သင်နှင့် သင်၌ပါသော ဤလူအပေါင်းတို့သည် ယခုထ၍ ယော်ဒန်မြစ်တဘက်သို့ ကူးကြလော့။ ဣသရေ လအမျိုးသားတို့အား ငါပေးသောပြည်ကို ဝင်စားကြလော့။ (ယောရှု ၁း၁-၂)
ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့် မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကို မဘတ် မရွတ်ဘဲမနေ၊ နေ့ညဉ့်မပြတ် ကြည့်ရှုဘတ်ရွတ်ရမည်။သို့ပြုလျှင် သင်သည် အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့် မည်။ \_v9သင့်ကို ငါမှာထားသည်မဟုတ်လော။ အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ မကြောက်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။ သွား လေရာရာ၌ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယောရှု ၁း၈-၉)
ကျမ်းစာ၏ နောက်ခံသမိုင်း အရ ဘီစီ ၁၄၀၀နှစ် ၁၃၀၀ အကြားတွင် ရေးသားထားသည်ဟု မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။ မောရှေသည် တဖတ်ကမ်းအထိသာခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ခါနန်ပြည်သို့ ရောက်အောင် မပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ချေ။ မောရှေသည် တောတွင်း တစ်နေရာတွင် အသက် (၁၂၀) အရွယ်တွင် ယော်ဒန်မြစ် တဖတ်ကမ်းတွင် သေဆုံးသွားသောအခါ လူများ ရက်ပေါင်း (၃၀) ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ မောရှေကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက် နောက်ထပ် မရနိုင်တော့ပါ ဟူ၍ ခံစားငိုကြွေးနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် လူကို သာ မြင်တွေ့ပြီး ဘုရားသခင်က ဦးဆောင်မည်ဟူသော အတွေးနှင့် ခံစားချက် မရှိကြသောကြောင့် ငိုကြွေးနေကြခြင်း သာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားပို့ဆောင်သည့် ဂတိတော်နယ်မြေသို့ သွားရန်မစဉ်းစားသေးဘဲ ငိုကြွေးခြင်းဖြင့်သာ အချိ်န်ယူ ၀မ်းနည်း နေကြ ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်က ယောရှုကို လာရောက်စကားပြောပါတော့သည်။
ဦးစွာပထမ ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားသင့်သည်မှာ ယောရှုဆိုသည်မှာ အဘယ်သူဖြစ်ပါသနည်း။ ယောရှုဆိုသော နာမည်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို လေ့လာသောအခါ “ယေဟောဝါ ဘုရားက ကယ်တင်သည်” ဟူသော အဓိပ္ပါယ် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ကို ဟေဗြဲ ဘာသာစကားအားဖြင့် ယောရှု (Joshua) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပြီး ဂရိဘာသာအားဖြင့် ယေရှု (Jesus) ဟူ ခေါ်ဆိုကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ ထိုကြောင့် ယောရှုနှင့် ယေရှုဟူသည်မှာ အတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယောရှုသည် ဣသရေလ လူမျိုးများ အဲဂုတ္တုမှ ထွက်ခွာ ကတည်းကပင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတစ်ဦး အနေဖြင့် (သို့) စစ်သေနာပတိချုပ် တစ်ဦးအနေဖြင့် စတင် ပါဝင် လိုက်ပါ လာခဲ့သည်ဟု သမိုင်းပညာရှင်တို့၏ ရေးသားချက်များအရ ခန့်မှန်းရပါသည်။ အဲဂုတ္တုမှ ထွက်ခွာလာသည့် အချိ်န်၌ ယောရှု၏ အသက်မှာ (၅၀) ခန့် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယောဒန်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းတွင် မောရှေ သေဆုံးချိ်န်တွင် ယောရှုသည် တောကန္တာရအတွင် အနှစ် (၄၀)ခန့် လှည့်လည်ခဲ့ပြီး နောက် အသက် (၉၀) ခန့် ရှိနေပြီဟု ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ရေးသားချက်များကို မှတ်သား ဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ ထိုအသက် (၉၀)မှ စတင်ကာ ဣသရေလ လူတို့ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် (၁၁၀) အရွယ်တွင် အနစ္စရောက်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဣသရေလအမျိုးကို နှစ်ပေါင်း (၂၀)လုံးလုံး စောင့်ရှောက် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အသံကို ကြားတတ်ပါစေ။
ယောရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပုံမှန် မိတ်သဟာရ ဖွဲ့တတ်သောသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အသံကိုလည်း ကြားတတ်သောသူ လည်းဖြစ်သည်။ သူ၏ တောင်းလျှောက်သံများကိုလည်း ဘုရားသခင်ဘက်က ကြားသိ အဖြေ ပေးခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် ယောရှုသည် ဝိညာဉ်အရာကို ပိုင်းခြားတတ်သောသူဖြစ်သည်။ ယနေ့ မိတ်ဆွေကို လည်း မေးခွန်းတစ်ခုလောက် မေးချင်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်၏ အသံကို ကြားဘူးသော သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသလား။ ယုံကြည်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို နာမည်ခံနေသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ အသံကို မကြားဘူးခဲ့ပါဟု အဖြေပေးခဲ့ပါလျှင် ခရစ်ယာန်ဟု ခေါ်သော မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဘို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများ (သို့) ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသည် ဘုရားသခင်၏ အသံကို ကြားနာဘူးသော သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသည် ဘုရားသခင်၏ အသံကို ကြားနာ ခံယူနိုင်သော (သို့) ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာရ ဖွဲ့နိုင်သော (သို့) ဘုရားကို ဆက်သွယ်နိုင်သော ခရစ်တော်၏ ၀ိညာဉ်သက်ကို ရရှိထားသော သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြသည်သူ ဆိုသည်မှာ သားတော်၏ အသက်ကို ရရှိထားမှသာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီး ဖြစ်သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို ခံယူနိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ဘူးပါသည်။ ထိုသူမှာ မွေးစကပင် ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို ၀ါကြွားလေ့ ရှိပါသည်။ ဓမ္မပညာကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာခဲ့သောကြောင့် Master of Theology (M.TH) ဘွဲ့ကိုလည်း ရယူပြီးဖြစ်ကာ ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းတွင် ဓမ္မကထိက တစ်ဦး အနေဖြင့် စာပြသင်ကြားပေးနေသော သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်ခါက သူ၏ ပြောဆို ဝေငှမှုတစ်ခုတွင် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များကို ပုတ်ခပ်ပြောဆိုမှု တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူပြောခဲ့သည်မှာ “ယနေ့ အမှုတော်ဆောင်တွေဟာ တော်တော် ရူးတဲ့သူတွေဘဲ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လူတွေကို ပြောဆို ဟောပြောနေကြတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကျမ်းစာကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ကျမ်းစာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဘွဲ့ဆိုရင်လည်း အတော်မြင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အသက်အရွယ် အတော်လေး ရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြောတဲ့ ဘုရားအသံဆိုတာ တစ်ခါမှ ကျွန်တော် မကြားဘူးပါဘူး” ဟု ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါသည်။ သူ့အမြင် ရှုထောင့်အရ ထိုသူတွင် ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုနိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိနေပါသည်။
သို့သော် သင်ကိုယ်တိုင်မူကား ထိုကဲ့သို့ တုပ ပြောဆိုမည်ဆိုပါက အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပေတော့မည်။ သင့်ဘ၀ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်နှင့် စစ်မှန်သော မိတ်သဟာရ မဖွဲ့ဘူးခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင်၏ တစ်စုံတစ်ရာ သွန်သင်မှုကိုလည်း မခံစားခဲ့ဘူးပါဟု ပြောဆိုခဲ့ပါက သင်၏ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု အနေအထားကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် ဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိ အမှန်တကယ် မရသော ကယ်တင်ခြင်း အတုကြီးကို အစစ်အမှန် ရသည်ဟု ထင်မှတ်လျက် ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်လွန်းသဖြင့် ကြိုးစား ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နေရသဖြင့် အလွန်ပင်ပန်းနေသောကြောင့် အသံတော် မကြားရခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် အမြဲတစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်သောသူဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ယောရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်နေသောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားကာ အမြဲတမ်း မှန်သော လမ်းတွင် အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းနေသောသူ ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပထမအချက် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အချက်အနေဖြင့် ယောရှုကို ဘုရားသခင်က ဆက်လက် မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ “ယောရှု၊ ငါ့ကျွန်မောရှေ တော့ အနိစ္စရောက်ပြီ။ ဒါကြောင့် အခုချက်ခြင်း ထပြီးတော့” ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သော စကားဖြစ်သည်။ ယခုပင် ထပါ။ အချိန်မဆွဲပါနဲ့။ အခုချက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတို့ ပြောလေ့ရှိသော စကားတစ်ခွန်းမှာ ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဟုပြောဆိုလေ့ ရှိပါသည်။ သင်၏ အသက်တာထဲတွင် ယခင်ကလည်း ထိုင်နေခဲ့ဘူးပြီး၊ ယခုထက်တိုင် ထဘို့ အစီအစဉ် မရှိသေး ဟု ဆိုပါက ဘာမျှ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ချေ။
ယနေ့လူတော်တော်များများကို လေ့လာကြည့်ပါက အချို့သောသူတို့သည် ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးမားမား ထားရှိကြပြီး ထိုရည်ရွယ်ချက်ကို ဖြစ်မြောက်ပြည့်မှီရန် အလွန်ကြိုးစားအားထုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အချို့သောသူများမှာမူကား ပြောကြီးသလောက် လက်တွေ့အသက်တာ ထဲတွင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင် သော အရာဟူ၍ မတွေ့ရချေ။ အပြောကမူ လေကြီး မိုးကြီးနှင့် ပြောဆို နေကြပြီး ဘာမျှ မလုပ်ဘဲ ထိုင်နေကြ သည်ကို တွေ့မြင် နေရပါသည်။ ကြီးကြီးမားမား ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောဆို နေကြ သော်လည်း (၅)မိနစ်ခန့်မျှပင် ဆုမတောင်းနိုင်ကြချေ။ ဘုရားသခင်၏ ဧ၀ံဂေလိတရားကို ကမ္ဘာ ဆုံးသည့် တိုင်အောင် ဟောပြောဆက်ကပ်မည်ဟု ပြောဆိုနေကြသော်လည်း ကျမ်းစာအုပ်ကို ကမ္ဘာဦးမှ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အထိ တစ်ခေါက်ပြီးအောင် မဖတ်ဘူးကြချေ။
ယနေ့ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ထပါဟု ပြောနေပါပြီ။ သင်ယခင်က မည်သို့ပင် စိတ်မပါ၊ လက်မပါ လုပ်ခဲ့စေကာမူ ယခုအခါ ဘုရားသခင်က စိတ်ပါကိုယ်ရောက် ဧကန် အမှန်ဆပ်ကပ်သော အသက်တာမျိုးကို လိုချင်ပါပြီး။ သင်ကိုယ်တိုင် ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာထဲကို ထိုင်ရာမှ ထကာ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ဘို့ ဘုရားသခင် ပြောဆိုနေပါပြီ။ ကျမ်းစာကို ကြုံရာ ကျပန်း ဖတ်သည့်ဘ၀မှ သေသေချာချာ လေ့လာ ဖတ်ရှုသော အသက်တာသစ်ကို ဘုရားသခင်က သင့်ကို ဖြစ်စေချင်ပါပြီ။ ယခုပင် ထ၍ ကျမ်းစာကို ဖတ်ဘို့ ပြင်ဆင်ပါ။ ယခုပင်ထ၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်နှင့် စတင်အတူလျှောက်လှမ်းပါ။ ဘုရားထားသော နေရာမှာ နေပါ။ ဘုရားစေခိုင်သော အလုပ်ကို လုပ်ပါ။ မိမိအသက်တာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အသက်တာကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပါ။
ယောရှုကို ဘုရားသခင်က ပြောရာတွင် ကျမ်းစာကို နေ့ညဉ့် မပြက် ကြည့်ရှု ဖတ်ရွတ်ပါက အောင်မြင်မှု ရမယ်လို့ နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ အတိအလင်းသွန်သင်ထားပါတယ်။ အဲဒီ သွန်သင်ချက်ကို တန်ဘိုးထား လေးစားလိုက်နာတဲ့ ယောရှုဟာ သူ့အသက်ရှင်မှု ဘ၀ တစ်ခုလုံးမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပြီး ချိုမြိန်တဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာတွေကို ခံစားရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယောရှု အသက်တာတွင် တစ်ခါ အမှား ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။ ထိုအမှားမှာ ယော်ဒန်မြစ် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ကူးပြီးနောက် ယေရိခေါမြို့ကြီးကို အနိုင်ယူခဲ့သောအခါ အနီးအနား တွင် ရှိသော ဂိဘောင်လူများကို သူတို့နယ်မြေကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ပြီး သူတို့ မသတ်စေရန် နည်းပရိယာယ် ကို အသုံးပြုကာ လှည့်စားခဲ့လေသည်။ ထိုသူတို့က သူတို့ဟာ အဝေးကြီးက လာခဲ့ရကြောင်းနှင့် သူတို့ကို မသတ်ဘို့ ပြောဆိုသောအခါ ယောရှုသည် ဆုလည်းမတောင်း၊ ဘုရားကိုလည်း မမေးမြန်းဘဲ ထိုလူတို့၏ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံလိုက်လေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုဂိဘောင်လူတို့မှာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဖြစ်ကြောင်း သိလာသောအခါ ကတိပေးပြီး ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။ (ယောရှု ၉း ၃-၂၀) ထိုတစ်ကြိမ်တည်းသာ အမှားအယွင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယောရှုအသက်တာတွင် ဘယ်သောအခါမျှ အမှား အယွင်ဆိုသည်မှာ မရှိခဲ့ချေ။
ယောရှု အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်ကို အရေးကြီးသော အချက် တချက် အနေဖြင့် ခံယူ ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က ယောရှုကို အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်ကို ပြောဆိုခဲ့ရာတွင် ဂတိတခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုကတိမှာ “သင်အသက် တည်သည့်ကာလပတ်လုံး သင့်ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှ မခံမရပ်နိုင်ရာ။ မောရှေနှင့် အတူ ငါရှိသကဲ့သို့ သင်နှင့်အတူ ငါရှိမည်။” ဟူ၍ ကတိပေးခဲ့ပြီး လက်တွေ့ အသက်တာထဲတွင်လည်း ယောရှု၏ အသက်တာထဲတွင် အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ ဘုန်းတန်ခိုးများကိုလည်း ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ယောရှုသည် သေသည်အထိ လူတိုင်းက သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေရသည့် အဖြစ်မျိုးကို ပေးသနားခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာတွင် သွားသည့် နေရာတိုင်း၊ လုပ်သည့်အရာတိုင်း တွင် ဘုရားသခင် အတူပါရှိပါက ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားမည်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘုန်းထင်ရှားခြင်း ဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အသက်ရှင်မှုကို ခံစား ရရှိမည်သာ ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင် ပြောသည့်အရာများကိုသာ ပြန်လည် ပြောဆိုပါ။
ယောရှု၏ အသက်တာတွင် မိမိ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပြောဆိုခြင်း မပြုဘဲ ဘုရားသခင် ပြောဆိုသော အရာများကိုသာ ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယနေ့ အမှုတော်ဆောင်များနှင့် ဧ၀ံဂေလိ ဆရာများသည် စိတ်ကူယာဉ် အကြောင်းအရာများကို ပြောဆိုနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင် ပြောဆို စေခိုင်းသော အမှုအရာများကိုသာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်ရပါသည်။
ယောရှုသည် ဘုရားသခင်စေခိုင်သည့် အရာများကို သူ၏ စစ်သည်များ၊ နောက်လိုက်နောက်ပါများကို ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်း နောက်သုံးရက်အတွင်း ယောဒန်မြစ်ကို ကူရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များ အားလုံးသည် ဘုရားသခင် စေခိုင်သည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုသည့်အခါ လူများ၏ တုန့်ပြန်မှုကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်ပါက ကိုယ်တော့် စကားတော်ကို မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ခံယူပါမည် ဟု ပြန်လည် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ (ယောရှု ၁း၁၆) ယောရှုစကားကို နားထောင်ခဲ့ ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယောရှုသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များကို ပြောကြားနေ သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် စည်းစိမ် ဥစ္စာနှင့် ဂုဏ်အသရေ ကြွယ်ဝလာကြသောအခါ မိမိတို့၏ ဘုရားကို စွန့်ပယ်ပြီး တပါးသော ဘုရားတို့နောက်ကို လိုက်ကြသောအခြေအနေကို ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထိုအခါ ယောရှုက အားလုံးသောသူတို့ကို ခေါ်ယူပြီး “မိမိ၏ အိမ်သူအိမ်သား ဖြစ်လျှင်မူကား ထာဝရ ဘုရားကိုသာ ကိုးကွယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း” (ယောရှု ၂၄း၁၅) အသိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအခါ ထိုသူ အပေါင်းတို့သည် နောင်တ တရားနှင့် ယောရှုကို ပြန်လည် တုန့်ပြန် ခဲ့ကြသည်။ ယောရှု အနိစ္စရောက်ပြီးနောက် နောက်ထပ် မျိုးဆက် တစ်ဆက်ကလည်း ဘုရားသခင်ကို သစ္စာရှိရှိဖြင့် ဆက်လက် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ (ယောရှု ၂၄း၃၁)
ယောရှုအသက်တာအားဖြင့် သင့်ကို ယနေ့ သွန်သင်နေပါသည်။ ယောရှုအသက်တာထဲတွင် ရှိခဲ့သော အမှုအရာများအတိုင်း သင့်အသက်တာကို ခံယူလိုက်လျှောက်ပါ။ (၁) ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားတတ်သောသူ ဖြစ်ပါစေ။ (၂) ယနေ့ပင် ထ၍ ဘုရားစေခိုင်းသည့် အရာကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။ (၃) နှုတ်ခပတ်တော်ကို တန်ဘိုးထား၍ ဖတ်ရှု အသက်ရှင်ပါ။ (၄) ဘုရားသခင် ပြောသောအရာများကိုသာ ပြန်လည် ဝေငှ သက်သေခံပါ။ အားလုံးအပေါ်မှာ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
← “ကယ်တင်ရှင် ငါ့ကို လမ်းပြသည်” ဓမ္မသီချင်း၏ ရာဇ၀င်
ဘုရားသခင်၊ မုဆိုးမနှင့် ဆီအိုး →